Kooxda Kubadda Cagta Banaadir oo Farxad ku soo dhaweysay Guusheeda Horyaalka Kubadda Cagta Soomaaliya
Mid ka mid ah Cayaartoyda Kooxda Banaadir oo kor u haaya Tabeelo ku qoran Magaca Naadigiisa
In kastoo shalay laga badiyay Kooxda Banaadir Telecom haddana meesha kama saarin Cayaartoyda kooxdaas inay u dabaaldegaan guushii taariikhda lahayd ee ay ka gaareen Horyaalka Kubadda Cagta Soomaaliya.
Kulankii shalay dhex maray Banaadir Telecom iyo Badbaado ayaa Kooxda Banaadir inta badan Cayaartoydii safka hore kaga jirtay Guusha Horyaalka waxa la geliyay kursiga keydka waxaa la safay Cayaartoyda Mustaqbalka Naadiga, kuwaas oo runtii muujiyay dadaal dheeraad ah.
Kabtanka Kooxda Banaadir Mustaf Xasan Cumar (France) ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay guusha kooxdiisa ka gaartay Horyaalka 35 aad ee Kubadda Cagta Soomaaliya, isagoo u sheegay taageeriyaashiisa kubadda Cagta inuu sii joogi doono naadiga uusan meel uga socon, wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo in Naadigiisa guulo kale sii gaaro haddii dadaalka ay hadda wadaan la sii labo laabo.
Cayaartii shalay markii ay dhamaatay Kooxda Banaadir waxay bilawday in socod dheer ku maraan Garoonka Banaadir Konis iyagoo kor u haaya Funaanadaha caanka ku tahay naadigaas.
Guusha Banaadir Telecom ayaa waxay ka dhigaysaa markii Labaad oo ay ku guuleysato Horyaalka kubadda Cagta Soomaaliya iyadoo 6 sano ka hor qaaday Horyaalka kubadda Cagta waddanka Soomaaliya.
Dadkii shalay u soo daawasha tagay Cayaartii dhex martay Banaadir Telecom iyo Badbaado waxaa ka mid ahaa Ciyaaryahankii hore ee Naadiga Banaadir Telecom iyo Kooxdii hore ee Waxool Sheekhuna Xaaji Cusmaan oo kaalin wanaagsan ka soo qaatay kor u qaadista Magaca Kooxda Banaadir.
Sidoo kale daawashada Cayaarta waxaa fadhiyay Tafatiraha Bogga Internedka www.dayniile.com Mr Kalaay oo ka yimid dalka Sweden.
Banaadir Telecom 24 dhibco - Elman 22 dhibco - SITT 17 dhibco
Dekedaha 16 dhibco
Nuuradin Macalin Mukhtaar (Dinow) nuurdiin007@hotmail.com
©2006 Somali Football Federation